28 marsa 2009: Ilay mahery fo tsy fantatra anarana!
2009-03-28 @ 22:16 in Politika
Andron'ny sabotsy 28 marsa 2009 andro mialoha indrindra ny fahatsiarovana indray ny ny 29 marsa 1947. Soa fa mbola misy ihany Malagasy tsotra, tsy ampoizinao, nefa hanamarika indray ny tantaran'i Madagasikara. Ilay tranga teo Andohan'Analakely ahitana lehilahy iray miakanjo maitso mitrotro kitapo mena manandratra avo ny sainam-pirenena Malagasy hitantsika any amin'ny vohikala hafa any no nampihetsi-po ahy indrindra tamin'ity tontolo andro ity. Hetsika manambara fahasahiana manoloana ireo miaramila malagasy mitondra basy efa hisambotra azy. Notapahin'ny vaovao mba nahitana ity fihetsika ity moa ny sary. Voadaroka ve ranamana sa nampiakarina tao anaty fiara pick up fotsiny? Ny fanatika minia mikimpy sisa no tsy mahita ny fihetsika maha-te-hidera nataon'ity lehilahy ity... Mahatsiaro latsaka ambany dia ambany eo anatrehany aho. Mahery letsy ialahy, fa tsy namaly ireo rehetra manoloana an'ialahy, tsy nandray vato ialahy mba hamaliana ny tsy rariny amin'ireto heverina fa tandroka aron'ny vozona natao hiaro ny vahoaka malagasy nefa mahasahy misambotra an'ialahy tahaka ireny hoe vahiny tsy miraharaha izay sainam-pirenena malagasy any izy, fa efa miaramila eo ambany fifehezan'ny firenena vahiny ve ireto miaramila ireto no olona tsy naninon-tsy naninona azy no samboriny? Efa nisy sahady koa moa taorian'ity lehilahy ity, fotoana fohy monja, no nanaraka ny nataony ary dia nosamborina ihany koa. Efa hatry ny nandraisan'ity mpandrobam-pitondrana ity ny fahefana no nahatsapako tao anatin'ny tenako tao fa niverina ho zanatany i Madagasikara, fa eto kosa... miharihary amiko tanteraka ny toe-draharaha. Toa te-haka ilay tamin'ny tononkalon'i Rado manao hoe: "Mahazo maty ialahy ry tenako! fa mijoro ny taranako!" iny aho. Ataoko fa hanana fifaliana ireo zokiolona tia tanindrazana raha mahita io lahatsary io! Sisa azoko natao: mitantara sy midera ny nataony.
Lasa adino tery ny isan'ny maty 3 (nolazain'ny matv ary tany amin'ny hopitaly miaramila soavinandriana io atontan'isa io) sy ireo maratra maherin'ny 30 tany amin'ny hopitaly. Tsy manamaivana ny nanjo azy ireo anefa sanatrian'izany! sady efa hitantsika rahateo fa tsy nisy nahasahy nilaza ireo fahafatesan'olona ireo na ny tvplus na ny rta. Milaza ny habibiana vitan'ny tetezamita manko izany ka sao mampihetsika ny hambom-pon'ny Malagasy. Izaho moa tsy afaka naka sary intsony fa simba ny fakantsary. Etsy andaniny ihany koa dia tsy maintsy namonjy toeram-piasana ihany koa aho, fa miditra amin'ny roa tolakandro manko. Na izany aza dia tsy maintsy hitantara aho ny zavatra hitako teo an-kianjan'ny 13 mey tamin'ity andro ity satria lalako handeha hiasa moa eo androany. Nihazakazaka nanala ny fiarany avokoa ny olona nanamorona iny manoloana ny 13 mey mizotra ho eny Tsaralalàna Conforama iny. Efa vonona amin'ny vato sy ny hazo kosa ny "mpiaro ny kianjan'ny 13 mey" mihoatra ny zato ary mihorakorak'hafaliana aoka izany isaky ny misy baomba alefa any amin'ny mpitolona hamerenana ny ara-dalàna. Mahasahy miteny mihitsy moa hoe: "ny novidian'ny dadan'ialahy ihany no alefa ho an'ialahy". Tsy anavahana izy ireto fa na lahy na avy ao avokoa. Efa miharihary fa tsy mikitika ireto mihitsy ny miaramila satria miara-miasa amin'izy ireo rahateo manko ireto mpitora-bato ireto.
Hitako tery lavitra tery ihany koa fa tsy nihontsona tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso sy ny baomba mankarenin-tsofina intsony ny mpanao fihetsiketsehana. Voatery nihemotra mihitsy moa ny miaramila. Ny mpitoraka kosa moa dia mahazo baiko ny haka ny lafin'Ambodifilao mandrakariva, any manko no betsaka olona tsy hahitana tsara izay tena mpitoraka. Ary dia raikitra ny toraka natao tamin'ireo lohalaharana! Taty amin'ny misy anay nahita tsara ireo miaramila nandeha tamin'ny pick up niala avy tany amin'ny nisy ny gara tany, somary nampiahotra ireo "mitora-bato" saingy tsy nataony na inona na inona moa ny "akamany" e!
Na izany na tsy izany, hilaza izay teny sy hevitra tsy ankasitrahako loatra aho. Tsy ankasitrahako ny tenin'ny senatera Lanto Rabeatoandro avy any Antsirabe miteny hoe: "raha mahay manapotika izy, isika koa mahay manapotika, raha mahay mandoro izy isika koa mahay mandoro..." tena tsy ao anatin'ny fanahin'ny tolona mihitsy manko io fomba fiteny io fa manosihosy mihitsy aza. Tsy ankasitrahako ihany koa ny mety ho fikasana hampidirana ny tafiky ny SADC satria izay fihetsika izay no andrasan'ny tafika frantsay efa miatrana any amin'ny nosy manodidina antsika. Hampizotra ny korontana ankehitriny hahatratra aman-taonany manko izany, ary mandritra io fotoana io no angalaran'ny mpanararaotra ny harena voajanaharin'i Madagasikara rehetra. Henatra ho an'ny tafika malagasy manontolo sy ny polisy rehetra miasa amin'izao fotoana izao rahatrizay ny tranga ankehitriny... satria hivandravandra ny fanekena ny halatra natao. Mahatsiaro ho tsy te-hifandray amin'ireto manana fitaovam-piadiana anatin'ny asany ireto mihitsy moa aho amin'izao fotoana izao.
Fa misy ihany koa ny zavatra tsara ampahatsiahivina ny mampaky, sady mbola tsy voalaza any an-kianja rahateo moa. Tsy miasa feno moa ny tiko amin'izao fotoana izao fa ny komandin'olona ihany no omena fahafaham-po. Aoka anefa ho fantatry ny mpamaky fa raha misy fiara mitondra ny entana amidin'ny tiko ka fantatry ny mpitandro ny filaminana dia raofin-dry zareo ho azy avokoa ireo entana ireo. Tsy "analana" velively amin'izay "trosan'ny tiko sy ny vondrona miaraka aminy" na oviana na oviana anefa ireny entana amidy ireny. Raha nanao fanambarana ny filohan'ny tetezamita tamin'ny zoma 27 marsa 2009 fa tonga ny vary izay hamidy mora, dia adidiko ny milaza aminao, fa vary nafaran'ny tiko saiky hanoloana ny vary efa norobaina tamin'ny volana voalohan'ny taona iny ireo vary ireo. Izany hoe, maka ny fananan'ny tiko maimai-poana izy ireo, ary dia amidy "mora" amin'ny vahoaka izany avy eo. Vary "halatra" izany no amidin'ny tetezamita amin'ny vahoaka malagasy mihevitra fa tena mitsinjo azy mihitsy ny tetezamita. Malahelo anaty fotsiny moa izahay mahafantatra ity vaovao ity.
jentilisa, alahady 29 marsa 2009 amin'ny 00:15 maraina